Ungayengeza Kanjani I-ejensi Yakho Njengomhlanganyeli Esitolo Sakho Sokuthenga | Martech Zone
Ungayengeza Kanjani I-Ejensi Yakho Njengomhlanganyeli Esitolo Sakho SakwaShopify
NgoLwesibili, Agasti 3, 2021 NgoLwesibili, Agasti 3, 2021 Douglas Karr
Ungalokothi unikeze imininingwane yakho yokungena ngemvume kuzingxenyekazi zakho kwi-ejensi yakho. Kunezinto eziningi kakhulu ezingonakala uma wenza lokhu - kusuka kumaphasiwedi alahlekile ukufinyelela kulwazi okungafanele babe nalo. Iningi lamapulatifomu kulezi zinsuku anezindlela zokwengeza abasebenzisi noma abahlanganyeli kungxenyekazi yakho ukuze babe namandla alinganiselwe futhi bangasuswa uma izinsizakalo seziqediwe.
Thenga ikwenza kahle lokhu, ngokusebenzisa i- ukufinyelela komhlanganyeli kozakwethu. Ubuhle babahlanganyeli ukuthi abangezi kwinani lakho lomsebenzisi onelayisense esitolo sakho se-Shopify, noma.
Setha Ukufinyelela Kokusebenzisana Komthengisi we-Shopify
Ngokuzenzakalelayo, noma ngubani angacela ukufinyelela ekubeni ngumhlanganyeli kusayithi lakho le-Shopify. Nakhu ukuthi ungabheka kanjani izilungiselelo zakho.
Zulalela ku Amasethingi.
Zulalela ku Abasebenzisi nezimvume.
Lapha uzothola ifayela le- Abahlanganyeli ingxenye. Izilungiselelo ezizenzakalelayo ukuthi noma ngubani angathumela isicelo somhleli. Uma ungathanda ukukhawulela ukuthi ngubani ocela ukufinyelela komhlanganyeli, futhi ungasetha ikhodi yesicelo njengenketho.
Yilokho kuphela okukhona kukho! Isitolo sakho se-Shopify sisethelwe ukuthola izicelo zomhlanganyeli ezivela ku-ejensi yakho okungenzeka zisebenza kokuqukethwe, izingqikithi, ukwakheka, imininingwane yomkhiqizo, noma ukuhlanganiswa.
I-ejensi yakho idinga ukusethwa njenge- Thenga Uzakwethu Bese bacela ukufinyelela komhlanganyeli ngokufaka i-URL yakho yesitolo ehlukile ye-Shopify (yangaphakathi) nazo zonke izimvume abazidingayo:
Lapho i-ejensi yakho isithumele isicelo somhlanganyeli, uzothola i-imeyili lapho ungabuyekeza futhi ubanikeze izimvume. Lapho usuvumele ukufinyelela kwesitolo, bangaqala ukusebenza!
Tags: ukufinyelela kwe-ejensiumhleliiziqinisekisothengaShopify umhleliThenga umlinganiThenga ozakwethuShopify umsebenzisiThenga izimvume zomsebenzisiThenga abasebenzisiizimvume zomsebenzisi